COPAC Yorambidza Vanhuwo Zvavo Kuita Minamato paKunyorwa kweBumbiro
Komiti iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo, yeCOPAC, inonzi yazivisa kuti minamato inoitwa panovhurwa hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu, yiitwe nemunhu weCOPAC, kwete nemunhuwo zvake sezvanga zvichiitika mazuva ose.
Sangano iri rinoti ratora danho iri sezvo vamwe vanga vachiita minamato inonyomba mamwe mapato, uye kutaura zvavanoda kuti zviiswe mubumbiro remitemo, zvakafanana nekuti vanoda mutungamiri wenyika aripo pari zvino, havadi kuti kodzero dzengochani dziiswe mubumbiro remitemo, nezvimwe zvakadaro.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio7 kuti mapato ose ari muhurumende akawirirana kutora danho iri.
Zvichakadaro, chirongwa chekutorwa kwepfungwa dzevanhu kuMashonaland West chinonzi chaenderera mberi neMuvhuro, mushure mekumbomiswa neSvondo zvichitevera kuramwa basa kwakaitwa nenhengo dzeMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai dziri muCOPAC, dzichinyunyuta pamusoro pemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo kuChegutu.
Musangano wekugadzirisa nyaya iyi wanga wakatarisirwa kuitwa, unonzi wava kuzoitwa neChitatu.